Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta booqanaya xerada qaxootiga Dhadhaab – STAR FM SOMALIA
Dowladda Kenya ayaa dhowaan sheegtay inay xireyso xeryaha qaxootiga, ayna dib u celineyso kumanaanka qaxooti ee ku sugan gudaha dalkeeda.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo la hadlayay Idaacada BBC-da ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu booqasho rasmi ah ku imaanayo Kenya, isagoo xusay in maanta uu tagi doono xerada qaxootiga Dhadhaab.
Waxaa uu sheegay in Madaxweynuhu u kuur galayo xaalada qaxootiga ee ku sugan xeryahaas, isagoo u soo gudbi doona magaalada Nairobi.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa maalinta berri oo Talaado ah kulmaya, iyagoo ka wada hadli doona xiriirka labada dal iyo go’aanka dowladda Kenya ku dooneyso inay ku xirto xeryaha qaxootiga.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horay u sheegay in aanay macquul aheyn in xilligan dowladda Kenya ay xirto xeryaha qaxootiga, isagoo doonaya in Kenya ku qanciyo inay ka laabato go’aankaas deg dega ah.
Haddii Madaxweynaha uu booqdo Xerada qaxootiga Dhadhaab waxaa uu noqonayaa Madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliyeed oo booqda xeradaas oo muddo 25 sano ay ku nool yihiin qaxooti ka soo cararay dagaaladii sokeeye iyo colaadaha Soomaaliya.
Dhamaadka sanadkan ayay dowladda Kenya cadeysay inay gebi ahaanba xireyso xeryaha qaxootiga.